सेतो रत्न::Nepali News Portal from Nepal
‘सेतो रत्न ? मलाई थाहा छ, रत्नहरू रातो, हरियो, र निलो हुन्छन … हो अनि कालो पनि हुन्छन, तर सेतो रत्नको बारेमा कहिल्यै सुनेको छैन । ठट्टा होइन ।
एक्स मेरो अवरोधबाट रिसाएझैँ गरी एकछिन रोकियो । ‘सायद तिमीलाई मेरो कथा मन परेन। ठीकै छ म भन्दिन ।’शंकालु जो थिएँ म उसको कथाप्रति, अब त अझ उत्सुक भएँ, अँ, साँच्चै रोमाञ्चित पनि । कस्तो कथा होला त्यो, साँच्चै, त्यो एक्सको सेतो रत्नको कथा ? कसरी अन्त्य हुन्छ होला त्यो कथा ?
एउटा चुरोट एक्स भएतिर बढाएँ र अनुरोध गरेँ, ‘ल, ल कथा भन। म अति उत्सुक छु ।’
एक्सले आफ्नै सुरमा बेपरवाह हाँसो हाँस्दै चुरोट सल्कायो र सेतो रत्नको कथा सुरु ग¥यो ।
‘एकपटकको कुरा हो। एउटा केटो, सायद आठ वर्षको हुँदो हो, एक दिन बाटोमा हिँडदा हिँडदै एकजनासँग जम्काभेट भयो । उ परिचित जस्तै लाग्दै थियो, तर उसको नाम सम्झन सकेन। को थियो त्यो मान्छ े? त्यो केटो तीन दिनसम्म माथापच्ची गरिरह्यो । जे होस, अन्त्यमा उसले सम्झ्यो त्यो मानिस को थियो। त्यो मानिस त्यही केटोको छिमेकी थिया,े जो दुइ वर्ष अगाडि कतै अन्तै सरेको थियो । त्यसैले त्यो केटोले नाम सम्झन सकेको थिएन । यत्तिकैमा एक्स रोकियो, अनुहारमा उही भावहिन मुस्कानका साथ। अनि आफ्नो चुरोटको बट्टाबाट एउटा चुरोट आफ्नो मुखमा घुसार्दै एउटा चुरोट म भएतिर बढायो ।
मैले आफ्नो लाइटर निकालेँ र एक्सको चुरोट सल्काइदिएँ । अनि आफ्नो पनि तथापि मेरो ध्यान चुरोटतिर थिएन । मैले सोचेँ एक्स चुरोट एकछिन तान्न चाहन्थ्यो ता कि ऊ आफ्नो कथा राम्रो तथा प्रष्टसँग भन्न सक्थ्यो । अनि, मैले सोचेँ, अहिलेसम्म कथामा सेतो रत्न त आएकै थिएन । हामी पुर्वकथन भन्दा अगाडि बढेका पनि थिएनौँ । अनि मैले सोचेँ, वास्तविक कथा त आउनै थियो । म त्यो सुन्न लालायित थिएँ कि त्यो केटो र सेतो रत्नको बीचमा के कस्तो सम्बन्ध थियो, या त्यो सेतो रत्न र त्यो केटोको छिमेकिको बिचमा के भयो ? मैले एक्सले मुख खोलुञ्जेल पनि धैर्य गर्न सकिन । अझै पनि एक्सको चाँडै कथा शुरू गर्ने सुर(सार केही थिएन । सन्तुष्ट मुद्रामा मन लगाएर उसले चुरोट तान्यो, र धुवाँको एक गोलो घेराजस्तो मुस्लो म तिर उडाइरह्यो ।
मेरो धैर्यताको बाँध टुट्यो र मैले फेरी उसलाई अनुरोध गरेँ,‘मित्र, मलाइ किन यसरी अन्धकारमा राख्छौ ? बाँकि कथा भन न ।’
‘सकियो त ! कथा त अघि नै सकियो ।’ फेरी धुवाँको गोलो मुस्लो उडाउँदै उसले भन्यो ।
‘सकियो ?’, मैले उसलाई यसरी हेरेँ सायद त्यतिबेला मेरा आँखाहरू कुखुराको अण्डा भन्दा पनि ठूला थिए होला । ‘कसरी ? सेतो रत्नको कथा तिमीले कतिखेर सिध्यायौ त ? सेतो रत्नलाई के भया े? अनि कथामा सेतो रत्न कहाँनेर छ त ?’
उता एक्स भने यो प्रश्नबाट रत्तीभर विचलित भएन । अनुहारमा उही तृप्त मुस्कानका साथ उसले भन्यो,‘महत्वपूर्ण कुरा यो होइन कि कथामा सेतो रत्न छ या छैन, अझ भर्खरै मैले तिमीलाई जे सुनाएँ त्यो कथा हो कि होइन, यो महत्वपूर्ण छ कि मेरा बारेमा शंकै शंका पालेर पनि, तिमी पुरै समय मेरा लागि एक मन्त्रमुग्ध, इमान्दार श्रोताका रूपमा मलाई सुनिरह्यौ, हो तिमीले मेरो कथामा विश्वास गरेनौ, तर हेर्दा हेर्दै जसरी भए पनि तिमी मेरो जालमा फस्न सक्यौ ।’
‘हँ ? उसो भए के तिमी मलाई मूर्ख बनाउँदै थियौ त ?’‘अँ त्यसरी सोच्दा पनि हुन्छ । तर वास्तविक प्रश्न यो हो कि, तिमी मूर्ख किन बन्यौ ? किन धेरै मानिसहरू उनीहरूलाई लादिएको कथामा विश्वास गर्छन शंका लाग्दा लाग्दै पनि ?’यी दुई प्रश्नहरूका साथ, मेरो साथि एक्सले मलाई अर्थपुर्ण रूपमा हेर्यो र हाँस्न थाल्यो ।